ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ Float Air Trap မှအရည်အသွေးမြင့် Float Air Trap ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်ခြင်း, ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပို့ကုန်အဖြစ် Float Air Trap in Taiwan။ အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းများထက် ပို. 20. ခိုင် R & D အစွမ်းဆောင်နိုင်မှု, အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကိုစုံလင်မေး / အဖြေထိန်းချုပ်ရေးစနစ်နှင့်တင်းကြပ်သောကုန်ကြမ်းဝယ်ယူထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှု standard နှင့်ဖောက်သည်ရဲ့အရည်အသွေးကအဆင့်နှင့်ပေးအပ်ခြင်းရက်စွဲခရီးဦးကြိုပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ enable ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်မူဝါဒပထမဦးဆုံးအရည်အသွေးဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်မြင့်မားသောထုတ်ကုန်များယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုဆက်ကပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်မဆိုဒုက္ခမဖြစ်စေပါနဲ့။ ကျေးဇူးပြု ယခုအဆက်အသွယ်.
အကောင်းဆုံး Float Air Trap ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် Float Air Trap ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ Float Air Trap ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
DSC CAST IRON FLOAT TYIR AIR ထောင်ချောက်များမဟုတ်ဘူး.F2A စီးရီး ●သံသတ္တိနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ခန္ဓာကိုယ်,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 17K. ●DSC FLOAT TYPE AIR ထောင်ချောက်များသည်ဖိအားပေးသောလေထုမှလည်းကောင်း၊ ဆီမပါရှိသေးသည့်နေရာများတွင်ဓာတ်ငွေ့စနစ်မှလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။. ●BALANCE LINE သည် DOWNSTREAM နှင့်ချိတ်ဆက်သင့်သည်။ လေအားပိတ်ခြင်းမှရှောင်ကွင်းနိုင်ရန်အမိန့်ပေးသည်။. ●ထိုင်ခုံနှင့်အဆို့ရှင်သည်ရေတံဆိပ်အောက်တွင်တည်ရှိသည်,လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းလေထုယိုစိမ့်မှုမရှိပါ. ●STRAINERS AIR TRAP ၏ရှေ့တွင်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်.အမျိုးအစားနံပါတ်.F2A-FSH12A
DSC CAST သံမဏိ float အမျိုးအစားလေယာဉ်ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.FS2A စီးရီး ●CAST သံမဏိကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 32K. ●DSC FLOAT TYPE AIR ထောင်ချောက်များသည်ဖိအားပေးသောလေထုမှလည်းကောင်း၊ ဆီမပါရှိသေးသည့်နေရာများတွင်ဓာတ်ငွေ့စနစ်မှလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။. ●လေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ယိုစီးမှုမတတ်နိုင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ချိန်ခွင်လျှာပိုက်လိုင်းအားချိန်ခွင်လျှာလိုင်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။. ●အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုအစားထိုးကြသည်. ●အစိတ်အပိုင်းများဆန့်ကျင်နှစ်နှစ်အာမခံချက်ထွက်ဝတ်ဆင်.အမျိုးအစားနံပါတ်.F2A-FSH12A
DSC အားလုံးသံမဏိ FLOAT အမျိုးအစား AIR ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.FS2A စီးရီး ●CAST သံမဏိကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 32K. ●DSC FLOAT TYPE AIR ထောင်ချောက်များသည်ဖိအားပေးသောလေထုမှလည်းကောင်း၊ ဆီမပါရှိသေးသည့်နေရာများတွင်ဓာတ်ငွေ့စနစ်မှလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။. ●လေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ယိုစီးမှုမတတ်နိုင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ချိန်ခွင်လျှာပိုက်လိုင်းအားချိန်ခွင်လျှာလိုင်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။. ●အားလုံးသံမဏိပစ္စည်းများ,လှပပြီးတာရှည်ခံ,နှစ်နှစ်ထုတ်ကုန်အာမခံ. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.FSS5A